MUKURU SIMBA internet Laser kucheka MACHINE KANA-H - China Shandong Oree Laser
MUKURU SIMBA internet Laser kucheka MACHINE OR-H
Mukuru-simba internet Laser nokuveza muchina chinhu yakanaka mukuru-simba Laser muchini edare, pamwe pasi rokutenga yokufambisa uye kudzidzisa mari, mukuru-kushanda zvakanaka uye yakakwirira-nokukurumidza okurwadzisa. Ndiro sarudzo kuti vanoshandisa kuti zvikomborero zvikuru. Izvi internet Laser nokuveza muchina zvikurukuru kushanda Stainless simbi, carbon simbi, chiwanikwa simbi, chitubu simbi, mhangura ndiro, aruminiyamu ndiro, ndarama, sirivha, titanium nezvimwe ndiro materials.Widely kushandiswa kushambadza, mukuru kumanikidzwa / yakaderera voltage magetsi cabinet kugadzira, Textile michini zvishongedzo, kicheni midziyo yemagetsi, motokari, michina, elevators, zvemagetsi nenhumbi, chitubu coils zvidimbu, metro mutsetse mativi uye mamwe maindasitiri.
Stainless simbi, carbon simbi, chiwanikwa simbi, chitubu simbi, mhangura ndiro, aruminiyamu ndiro, ndarama, sirivha, titanium nezvimwe ndiro zvigadzirwa.
Zvinowanzoshandiswa kushambadza, mukuru kumanikidzwa / yakaderera voltage magetsi cabinet kugadzirwa, Whitehead Textile michina nenhumbi, kicheni midziyo yemagetsi, motokari, michina, elevators, zvemagetsi nenhumbi, chitubu coils zvidimbu, Metro mutsetse mativi uye mamwe maindasitiri.
The mumuchina akashongedzerwa ane vakatsinhanisa kaviri kushanda papuratifomu. Pandaishanda patafura rimwe, mumwe pachikuva anogona Takudzai uye tutunura jira workpiece.
The simbi Laser nokuveza muchina unodzivirira butiro ane hunhu kunyatsoteerera mamiriro, hunonzwisisa, hapana ruzha, hombe sitiroko, nokutsanya kufamba uye upenyu basa refu. Pakuonekwa ichava yakanaka, uye mugumisiro ndeyokudzivisa zvakakanganiswa parutivi simbi guruva pakupera kubudiswa.
Laser simba, wattage
The simba neimwe Laser anogona kuchinja maererano chaizvo okukohwa zvinodiwa. Nenzira iyi, mumwe muchina anogona kusangana siyana rokutema zvaanoda uye vabudirire migumisiro multi-chinangwa.
The kukandira simbi mubhedha
flake graphite vakakanda simbi pamwe risingamboshandisi tensile simba 200 MPa. High kabhoni kugutsikana, compressive simba neukukutu. High kuvhunduka Absorção de Água uye kupfeka nemishonga. Good Kudzingwa waivako uye okurwadzisa unongotaura. Chengeta rakarurama muchina chokushandisa kwenguva refu, kuchinja kwemakore 50.
Working Area 1500 * 3000mm (optional)
Laser Power 4000w / 5000w / 8000w
achiita zvokutemera Speed 4500 * 2300 * 2000mm (optional)
Cutting Speed ± 0.02mm
Highest kushanda pakuvheneka zvakarurama ± 0.03mm
Kuwana Kutaura 145 / Maminitsi
Previous: Exchange Platform Cutter Fiber Laser Cutting Machine OR-E
Next: MIDDLE Sheet internet Laser kucheka MACHINE OR-FM
Tube internet Laser kucheka MACHINE OR-T
CHIEDZA dhipuroya Tube Laser kucheka MACHINE OR-TL